4 Ụzọ Watch iTunes Movie on Android
E nwere global nnabata nke Android OS Smartphones na mbadamba. Apple gadget ọrụ ndị na-enweghị atụ na ọhụrụ Smartphones ọkụkụ ahịa na-agba ọsọ na Android OS dị ka LG, HTC, Motorola, Sony, Samsung na Google onwe ya. Niile nke ndị a handsets ugbu a nwere a nnukwu ihuenyo ma na-ekiri vidio na HD nkiri na ha bụ a mma. Ikiri iTunes nkiri na gị Android ekwentị mgbe a nsogbu.
Apple anọchi music videos, fim na TV ngosipụta na iTunes Store iji M4V faịlụ. N'aka nke ya, ndị M4V faịlụ na-emekarị na-echebe site FairPlay Digital Rights Management nwebisiinka nchebe nke Apple. Na-egwu ihe iTunes M4V nkiri na a ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-agba ọsọ Android os, bụ DRM (Digital Rights Management) nchebe ga-ewepụ. N'aka nke ya, Ndekọ a video si iTunes ka Ụdị dakọtara na Android bụ omume. Nke si ụzọ anọ ẹkenịm n'okpuru, ị ga-maa chọta kasị pụrụ ịdabere na usoro nke-ebufe videos na-echebe site DRM n'ime Android OS playable format na-arụ ọrụ maka gị. Ozugbo akakabarede dị n'elu, na iTunes nkiri ga-playable na ihe Android gadget ka ọ bụla ọzọ nkiri faịlụ.
Iji aka Bugharịa Files
Pavtube Chewtune Android teepu
Video Converter Ultimate e
Nke a Android ngwa arụ ọrụ otu otu na iTunes mgbe syncing gị video ọdịnaya gaa na ihe gam akporo ngwaọrụ site na Wi-Fi ma ọ bụ USB. E wezụga syncing music, ọ na-ekwe syncing nke Skip adabere, play adabere, artwork, na listi ọkpụkpọ, n'etiti ndị ọzọ. iSyncr na-enye ohere syncing ọhụrụ video ọdịnaya na ihe gam akporo ngwaọrụ n'ime iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Nzọụkwụ 1: jikọọ na ngwaọrụ mmekọrịta.
Nzọụkwụ 2: A ndepụta na-egosi gị dum iTunes listi ọkpụkpọ a ga-emere.
Nzọụkwụ 3: Metụ naanị faịlụ i bu n'obi na snyc na pịa amalite. The mbụ mmekọrịta pụrụ oge ụfọdụ, ma mgbe na ihe niile ga-adị mfe na blissful.
Nzọụkwụ 4: Chọta a kwesịrị ekwesị Android mgbasa ozi ọkpụkpọ ngwa na-amalite na ịnweta ọdịnaya gị synced si iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Iji aka Bugharịa faịlụ site iTunes Gị Android Ngwaọrụ
Usoro a dị mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ, ma nwekwara ike ịbụ tedious, karịsịa ma ọ bụrụ naanị a di na nwunye nke kpọmkwem tracks na-achọrọ.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ Android ngwaọrụ ma na-etinye ya n'ime uka nchekwa USB na ọnọdụ.
Nzọụkwụ 2: Gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ a depụtara na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Jide n'aka gị iTunes faịlụ na-depụtaghachiri ka iTunes Media nchekwa. Gaa iTunes, Dezie → Advanced, na mgbe ahụ ego nhọrọ "Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ".
Nzọụkwụ 4: Site Music nchekwa, họrọ faịlụ site na iTunes ozugbo.
Nzọụkwụ 5: idetuo na mado ha n'ime gị mbadamba nkume ma ọ ekwentị nchekwa.
Cheta na: Ndị na-eji a Mac na chọrọ ịkwaga faịlụ mkpa ibudata Android File Nyefee ukara ngwá ọrụ.
Pavtube Chewtune Android teepu Ngwá Ọrụ
Pavtube Chewtune bụ a free ngwá ọrụ na-dị maka fọrọ nke nta onye ọ bụla na mgbe njikere maka download.
Nzọụkwụ 1: Malite site itinye M4V faịlụ. Mgbe na-agba ọsọ na ngwá ọrụ, ịgbakwunye videos ma site na-adọkpụpụta ma ọ bụ idobe ha ozugbo ma ọ bụ importing ha.
Nzọụkwụ 2: Họrọ format site na ịpị ndọpụta ndepụta ma họrọ MP4; ọ bụ ihe kasị dakọtara na Android Ngwa.
Nzọụkwụ 3: Pịa "Mwube" icon ka ịnweta Profaịlụ Ntọala window. Ị ga-achọta ntọala maka etiti ọnụego, bitrate, codec na video size. The video ụdịdị nwere na-agbanwe agbanwe.
Nzọụkwụ 4: The usoro nke iTunes M4V akakabarede n'ime Android dakọtara format ga-amalite. Nke a na-eme site na ịpị "tọghata" akara ngosi. iTunes fim DRM wepụrụ na ndekọ na-amalite n'ime ihe Android playable usoro. Ngwá ọrụ a activates iTunes na akpaghị aka namalite na-akpọ nkiri faịlụ. Ị gaghị na-emechi ma ọ bụ wepu Player windows.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo akakabarede bụ n'elu, pịa "mmepụta Open nchekwa" maka ngwa ọnọdụ nke converted nkiri faịlụ.
Nke a bụ onye kensinammuo ngwá ọrụ na-enyere aka iji tọghata iTunes fim na vidiyo ndị ọzọ n'ime a format dakọtara na Android mfe ihe interactively.
Nzọụkwụ 1: Mgbe nbudata na-agba ọsọ na software, mbubata iTunes fim nke oke ka ngwá ọrụ Central ọrụ ebe.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ebe nchekwa na mmepụta usoro. Nke a mere site na ịpị dropdown format menu na ị na-ahọrọ na mmepụta format dị ka Android os. Na mmepụta nchekwa, họrọ nri nchekwa na ga jide converted videos.
Nzọụkwụ 3: Malite ntọghata na nyefe nke iTunes faịlụ n'ime gị Android ekwentị. Mgbe agbanwe agbanwe na ntọala dị ka chọrọ, pịa "tọghata" akara ngosi. Ozugbo akakabarede bụ n'elu, chọta converted iTunes nkiri site na ịpị "Chọta Target".
Ị nwere ike ijikọ na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka PC site a USB na na iba na-ebufe nkiri faịlụ effortlessly.
Comparison Chart maka 4 Ụzọ
Beyond yiri ụdịdị dị ka wepụ DRM nchebe na converting iTunes nkiri faịlụ n'ime Android playable formats, ebe a bụ ụzọ dị iche iche anọ ụzọ tụnyere. Ha dị iche iche kwa nke iche na-enyere gị aka na-eme gị n'uche na nke kacha mma usoro i nwere ike ịgbalị taa. Otú o sina dị, ndepụta bụ enweghị ike ịgwụcha agwụcha.
Iji aka Paghaa
Pavtube Chewtune Ngwá Ọrụ Method
Iṅomi nke DRM echebe faịlụ
Ọ dịghị Ọ dịghị Ee Ee
Audio faịlụ akakabarede
Mmịpụta nke ọdịyo si video
Ee Ọ dịghị Ee Ee
Ọ dịghị Ee Ee Ee
Help & Nkwado
Android WiFi File Nyefee: Nyefee Android Files-ejighi eriri
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si LG obi ụtọ
> Resource> Android> 4 Ụzọ Watch iTunes Movie on Android